Doorashada koofur Galbeed oo la filayo in ay dhacdo Dhamaadka Bishan. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADoorashada koofur Galbeed oo la filayo in ay dhacdo Dhamaadka Bishan.
November 18, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Doorashada koofur Galbeed oo la filayo in ay dhacdo Dhamaadka Bishan.
Xildhibaan Nuur Ibraahim oo ka mid ah gudiga doorshada madaxweynaha maamulka koonfur Galbeed oo la hadlay idaacada Kulmiye ayaa waxaa uu ka warbixiyay xiliga ay dhacayso doorashada Madaxweynaha Maamulkaasi.
Waxaa uu shaaca ka qaaday in doorashada ay dhici doonto 28 bishan, iyadoona Gudiga maanta la filayo in ay kulan yeesheen.
Warar Hoose ayaa sheegaya in maanta ay kulan yeelan doonaan Xubnaha ka tirsan Gudiga Doorashada ee Maamulka koofur Galbeed, iyagoona dooran doono Gudoomiye, xigeen iyo xoghaya Doorashada ee Maamulkaasi.
Doorshada Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ayaa Horey lagu balansanaa in ay dhacdo 17 bishan, iyadoona ay baaqatay, waxaana arintan loo sababay in ay tahay kadib markii xubno badan oo ka tirsan Gudigga Doorashada ay iscasileen.
Musharixiin aad u fara badan ayay waxaa ay ku sugan yihiin Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay.
Ciidamada Puntland oo dhaq-dhaqaaqyo ka wado Gobalka Barri.
711,464 total views, 8,681 views today
711,464 total views, 8,681 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
711,339 total views, 8,680 views today
711,339 total views, 8,680 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
711,369 total views, 8,680 views today
711,369 total views, 8,680 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
711,433 total views, 8,682 views today
711,433 total views, 8,682 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
711,486 total views, 8,681 views today
711,486 total views, 8,681 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]